तालिबानले पत्रकारलाई मरसान्न हुने गरी पिटे, भनेः टाउको नकाटेकोमा खुशी हुनू! - Dainik Online Dainik Online
तालिबानले पत्रकारलाई मरसान्न हुने गरी पिटे, भनेः टाउको नकाटेकोमा खुशी हुनू!
प्रकाशित मिति : २५ भाद्र २०७८, शुक्रबार १२ : २२
अफगानिस्तानमा दुई पत्रकारलाई तालिबान लडाकुले मरसान्न हुनेगरी कुटपिट गरेका छन्। काबुलमा रिपोर्टिङमा रहेका उनीहरुले गत बुधबार महिला विरोध प्रर्दनको तस्बिर र भिडियो खिचेको भन्दै तालिबानका लडाकु उनीहरुमाथि जाई लागेका थिए।
एएफपीका अनुसार एटिलाट्रोज अखबारका दुई पत्रकारलाई तालिबानले गिरफ्तार गर्दै कुटपिट गरेका हुन्। सार्वजनिक भएको तस्बिरहरुमा ती दुई पत्रकारको शरीरभर चोटैचोट देख्न सकिन्छ। बीबीसीका अनुसार पत्रकार ताकी दरयाबी र फोटोपत्रकार नेमतुल्लाह नकदीमाथि मरसान्न हुनेगरी कुटपिट भएको हो।
गत बुधबार महिलाहरुले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा महिला अधिकारको नारा लगाउँँदै तालिबान सरकारमा आफूहरुलाई स्थान दिनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरुले पाकिस्तानको दूतावास अगाडि पनि विरोध गरेका थिए।
जवाफमा तालिबानका लडाकुले महिलामाथि पनि कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटको घटनाको फोटो तथा भिडिओहरु सार्वजनिक भएका छन्। ती पत्रकारहरुका अनुसार महिलालाई कुटपिट गरेको भिडिओ खिचेको भन्दै तालिबानले उनीहरुलाई कुटपिट गरेका थिए। हात र खुट्टा बाँधेरै कुटपिट भएको थियो।
फोटो पत्रकार नेमतुल्लाहका अनुसार तालिबानका ८ सदस्यले क्यामेरा खोसेर कुटपिट गरेका थिए। उनीहरुले खुट्टाले उनको टाउकोमा टेकेका थिए। किन कुटपिट गरेको भनेर सोध्दा नेमतुल्लाहका अनुसार एक लडाकुले भनेका थिए,‘टाउको नकाटेकोमा चाहीँ खुशी हुनू।’
-तालिबानको विवादस्पद अभिव्यक्ति, भन्योः महिलाले बच्चा जन्माउने हो मन्त्री बन्ने होइन
सभापति देउवासँग छलफल गर्न पौडेल समूह बालुवाटारमा